Ahoana ny famahanana ny lahatsoratra bilaoginao WordPress amin'ny alàlan'ny marika ao amin'ny maodely ActiveCampaign anao | Martech Zone
Ahoana ny famahanana ny lahatsoratra bilaogy WordPress anao amin'ny alàlan'ny marika ao amin'ny maodely ActiveCampaign anao
Alatsinainy Aprily 11, 2022 Alatsinainy Aprily 11, 2022 Douglas Karr
Miasa amin'ny fanatsarana ny dia mailaka sasany ho an'ny mpanjifa iray izay mampiroborobo karazana vokatra maro amin'izy ireo WordPress site. Ny tsirairay amin'ireo ActiveCampaign ny môdely mailaka izay amboarinay dia tena namboarina ho an'ny vokatra fampiroboroboana sy anomezany votoaty.
Raha tokony hamerina manoratra ny ankamaroan'ny votoaty efa novokarina sy voalamina tsara ao amin'ny tranokala WordPress izahay, dia nampiditra ny bilaogin'izy ireo tamin'ny maodely mailaka. Na izany aza, ny bilaogin'izy ireo dia mirakitra vokatra marobe ka tsy maintsy nanivana ny fahana ho an'ny modely tsirairay izahay amin'ny alàlan'ny fampidirana lahatsoratra bilaogy voamariky ny vokatra ihany.
Izany dia manondro ny maha-zava-dehibe ny fametahana ny lahatsoratrao! Amin'ny fanisana ny lahatsoratrao dia mora kokoa ny manontany sy mampiditra ny atiny amin'ny sehatra hafa toy ny mailaka.
Ny WordPress Tag Feed anao
Raha mbola tsy tonga saina ianao dia manana rafitra famahanana matanjaka be ny WordPress. Mety hieritreritra ianao fa voafetra amin'ny famahanan'ny blôginao tokana ny tranokalanao. Tsy… afaka mamokatra fahana mifototra amin'ny sokajy na marika mihitsy aza ianao ho an'ny tranokalanao. Ny mpanjifanay amin'ity ohatra ity dia Royal Spa, ary ireo môdely roa noforonina dia natao ho an'ny Tubs mafana and for Tanks mitsingevana.
Tsy voasokajy araka ny karazana vokatra ny lahatsoratr'izy ireo ao amin'ny bilaoginy, noho izany dia nampiasa marika izahay. Ny lalan'ny permalink hidirana amin'ny fahanao dia ny URL blôginao arahin'ny slug tag sy ny tena tag anao. Noho izany, ho an'ny Royal Spa:
Lahatsoratra Royal Spa voamarika ho an'ny Hot Tubs: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/
Lahatsoratra Royal Spa nasiana marika ho an'ny tanky mitsinkafona: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/
Mba hahazoana ny Syndication Tena Tsotra (RSS) fahana ho an'ny tsirairay amin'ireo, azonao atao fotsiny ny manampy / fahana amin'ny URL:
Lahatsoratra Royal Spa nasiana marika ho an'ny Hot Tubs: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/feed/
Lahatsoratra Royal Spa nasiana marika ho an'ny tanky mitsinkafona: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/feed/
Azonao atao koa ny manao izany amin'ny alalan'ny querystring:
Lahatsoratra Royal Spa nasiana marika ho an'ny Hot Tubs: https://www.royalspa.com/blog/?tag=kobo mafana&feed=rss2
Lahatsoratra Royal Spa voamarika ho an'ny tanky mitsinkafona: https://www.royalspa.com/blog/?tag=float-tank&feed=rss2
Azonao atao mihitsy aza ny manontany marika maromaro amin'ity fomba ity:
Lahatsoratra Royal Spa nasiana marika ho an'ny tanky mitsinkafona sy koveta mafana: https://www.royalspa.com/blog/?tag=tank mitsingevana, koveta mafana&feed=rss2
Raha mampiasa sokajy ianao dia azonao atao ny mampiasa ny slugs sokajy (anisan'izany ny subcategory) ary koa ny tag… ity misy ohatra:
Azonao atao ny mahita ny antony maha-zava-dehibe an'io rehefa mamerina ny atiny ho an'ny media hafa ianao. Mamporisika ny mpanjifanay rehetra izahay mba hampiditra ny lahatsorany ao amin'ny gazetiny, mailaka fampiroboroboana, ary na dia ny mailaka ara-barotra aza. Ny atiny fanampiny dia afaka manatsara ny mailaka, manana tombony maro:
Ny mpamatsy mailaka sasany Algorithm fametrahana boaty mankasitraka votoaty an-tsoratra bebe kokoa amin'ny mailaka.
Ny lahatsoratra fanampiny dia tena mifanentana amin'ny lohahevitra, mampitombo fifamofoana miaraka amin'ireo mpanjifanao.
Na dia mety tsy hitarika ny mpanjifanao amin'ny antso ho amin'ny hetsika sy ny tanjona voalohany amin'ny mailakao aza izany, dia afaka manome lanja fanampiny sy ahenao ny fidiran'ny mpanjifanao.
Nampiasa vola tamin'io atiny io ianao, koa maninona raha averina ampiasaina hampitombo ny fiverenany amin'ny fampiasam-bola?
Ampio RSS Feed amin'ny ActiveCampaign
Ao amin'ny ActiveCampaign, mora ny manampy RSS Feed:
Sokafy ActiveCampaign ary mandehana mankany Fanentanana > Tantano ny maodely.
Sokafy ny môdely efa misy (amin'ny fipihana azy), Manafatra môdely, na tsindrio Mamorona Template.
Iray amin'ny menio havanana, safidio Ampidiro > Blocks > RSS Feed.
Manokatra ny RSS Feed Builder varavarankely izay ahafahanao mampiditra ny adiresinao Feed ary mijery ny fahana:
Amboary ny RSS Feed. Amin'ity tranga ity, mila lohateny mifandray tsotra sy famaritana fohy fotsiny aho:
Ho hitanao izao ny Famahanana ao amin'ny Templateo mailakao, izay ahafahanao manova ny lamina araka izay tianao.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ity fomba fiasa ity dia tsy ilaina intsony ny manavao imbetsaka ny votoaty amin'ny mailaka sy ny dia rehefa manohy mamoaka votoaty vaovao ao amin'ny blôginao ianao.
Fampahalalana: mpiara-miasa amiko i ActiveCampaign ary ny orinasako dia manampy ny mpanjifa amin'ny fandrosoana WordPress fampandrosoana, fampidirana ary tetikady sy fanatanterahana ny automatique marketing. Mifandraisa aminay amin'ny Highbridge.
Tags: ActiveCampaignblôgy tagssokajy fahanafahana manokanamailaka Marketingfahanatena syndication tsotra izaospa mpanjakaRSSrss feedrss feed builderrss handefa mailakaSyndicationfeed feedtaggingWordPressfamahanana wordpresswordpress tag feed